Soomaaliya, 09 May 2018
Arbaco 9 May 2018
Qarax ismiidaamin ah oo 14 qof ku dilay Sh/Hoose
Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu 14 qof ku dilay, islamarkaana 15 kale ku dhaawacay suuq ku yaalla degmada Wanlaweyn ee gobolka.
Buugga Tacaddiyada Gabdhaha Saxafiyiinta ah
Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay buug uu dhowaan soo saaray urur lagu magacaabo SWJ oo ah urur ay sameysteen qaar ka mid gabdho saxafiyiin ah oo ka howlgala koofurta, bartamaha iyo degaanada Puntland.
Dagaal beeleed ka dhacay gobolka Sanaag
Dagaallo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac, ayaa maanta ka dhacay deegaanno hoos yimaadda gobolka Sanaag.
Human Rights Watch oo dhaliishay Somaliland
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 420-aad
Dhageyso Galka Baarista: Sida loo baalmaro canshuuraha dowladda
Lacago malaayiin dollar ayaa dawladda Soomaaliya uga lunta shirkadaha qandaraaska ka haysta Qaramada Midoobay oo baal mara heshiis ay dawladdu la gashay Qaramada Midoobay.
Hiiraan: Diyaarado duqeeyey saldhig Al-Shabaab
Diyaarado aan la aqoonsan ayaa shalay galinkii dambe waxaa ay duqeyn ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Jiljileey oo18 KM u jiro tuulada Ceelcali oo dhanka galbeed illaa 70 KM uga beegan magaalada Baledweyne ee xaruunta gobalka Hiiraan.
Kheyre oo dalbaday in Somalia laga qaado xayiraadda hubka
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre ayaa ka dalbaday Golaha Ammaanka ee QM in Soomaaliya laga qaado xayiraadda hubka ee saaran muddada fog.
Cilmi baaris laga sameeyey caddaaladda Somalia